Sharciga sharciga ah | Abaalmarinta Abaalmarinta - Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Resources Sharciga Sharciga
Boggani waa qaanuunka sharciga ah ee "The Reward Foundation". Boggaan waxaa ku jira macluumaad guud oo ku saabsan arrimaha sharciga. Macluumaadku maaha talo, mana aha in loola dhaqmo sida.
Macluumaadka sharciga ah ee ku yaal boggaan waxaa la bixiyaa "sida" waa iyada oo aan jirin wax matalaad ah ama damaanad ah, muujin ama qeexaya. Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta (Funding Foundation) kama dhigo matalaad ama shuruudo la xidhiidha macluumaadka sharciga ah ee boggan.
Iyadoo aan loo eegin guud ahaan cutubka la soo dhaafay, Hay'adda Reward Trust ma sheegayso in:
• Macluumaadka sharciga ah ee ku yaala website-kan ayaa si joogto ah loo heli karaa, ama laga heli karo; ama
• Macluumaadka sharciga ah ee ku yaal boggaani waa dhamaystir, run, sax ah, si joogto ah, ama aan marin habaabin.
Adeegyada Adeegyada iyo Websaydhada
Waxaad si cad u qiraysaa oo aad ogolaatay in:
Adeegsigaaga Adeegyada iyo Websaydhada ayaa qatar keliya ku jirta. Abaalmarinta Abaalmarinta waxay samaysay dadaal kasta si loo hubiyo in waxyaabaha ku jira Websaydhka (yada) laguna soo bandhigo Adeegyada ay yihiin kuwo sax ah oo casriyeysan oo sax ah waqtiga la daabacayo. Si kastaba ha noqotee, Websaydhada (yada) iyo Adeegyada waxaa lagu bixiyaa 'sida ay tahay' iyo 'sida la heli karo'. Annagu dammaanad kama qaadaynno saxsanaanta, waqtiga, dhammaystirka ama jirdhiska ujeeddada laga qabo waxyaabaha ku jira Websaydhka (yada) ama Adeegyada ama isticmaalka Websaydhku (internet) ma noqon doono mid aan kala go 'lahayn, fayras lahayn ama aan khalad lahayn. Ma jirto masuuliyad ay aqbasho ama u wakiilato Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta wixii khaladaad ah, ka-dhaafitaan ama macluumaad aan sax ahayn ah oo ku yaal Websaydhka ama laga heli karo Adeegyada.
Qalab kasta oo la soo dejiyey ama haddii kale lagu helay isticmaalka Adeegyada waxaa lagu sameeyaa ikhtiyaarkaaga iyo halista aad adiguna waxaad mas'uul ka noqon doontaa wixii dhaawac ah ee ku yimaada nidaamka kombuyuutarkaaga ama luminta xogta ka dhalanaysa soo dejinta wax kasta oo noocaas ah.
Ma jiraan wax talo ama macluumaad ah, ha ahaato mid af ama qoraal ah, oo aad ka heshay Hay'adda Abaalmarinta Reward Foundation oo abuuri doonta wax damaanad ah ama waajibaad kale ah oo aan si cad loogu sheegin Xeerarkan iyo Shuruudaha.
Wadarta guud ee mas'uuliyadda Aasaasiga ah ee adiga qandaraaska, qayaxan, (oo ay ku jiraan dayacaad) ee la xiriira Shuruudahaan iyo Shuruudahaan, isticmaalka Websaydhada (yada) iyo / ama Adeegyo kasta ayaa ku xaddidnaan doona inta ugu badan (a) £ 150.00 iyo ( b) qiimaha aad si sax ah u bixisay The Reward Foundation qandaraas kasta oo ku saabsan adeegyada la bixiyo inta lagu jiro saddexda bilood ee ka horreeya dhacdada dhalisay sheegashada.
Waxaad si cad u qiratay oo aad ku raacday in hay'adda 'Reward Foundation' aysan masuul ka noqon doonin waxyeello aan toos ahayn, mid gaar ah, mid gaar ah, mid la taaban karo ama ku dayasho mudan, ama si toos ah ama aan toos ahayn u luminaysa macaashka, dakhliga, ganacsiga, keydka la filayo, niyad sami ama fursad.
Ma jiraan wax ka mid ah Shuruudahaan iyo Shuruudahaan oo saameyn ku yeelan doona xuquuqda sharci ee macaamiil kasta ama ka reebaya ama xaddidaya mas'uuliyadda khayaanada ama dhimashada ama dhaawaca shaqsiyeed ee ka dhasha dayacaadda Abaalmarinta Abaalmarinta.
Waxyaabaha ku jira Websaydhka (yada) oo laga heli karo Adeegyada waxaa loogu talagalay macluumaad guud oo keliya mana loogu talagalay, mana aha, inay noqdaan sharci ama talo kale oo xirfadlayaal ah ama adeegyo ama talo soo jeedin ah in la iibsado wax soo saar ama adeeg go'aan gaar ah waa in la gaaraa. Macluumaadka, waxyaabaha ku jira Websaydhada iyo Adeegyadu wax kama qabanayaan duruufahaaga gaarka ah sidaa darteedna waa inaadan ku tiirsanayn waxyaabaha ku jira Websaydhka iyo Adeegyada beddel ahaan talobixin xirfadeed oo habboon.
Hay'adda Reward Foundation mas'uul kama aha sida waxyaabaha ku jira Websaydhka (yada) ama laga heli karo Adeegyada loo istcimaalo, loo fasiro ama waxa la isku halleeyo. Ma aqbalno wax masuuliyad ah natiijada ficil kasta oo lagu qaado iyadoo lagu saleynayo macluumaadka lagu bixiyay Websaydhka (yada) ama laga heli karo Adeegyada.
Waa inaadan ku tiirsaneynin macluumaadka ku yaal boggan sida beddelka talada sharciga ee qareenkaaga, Qareenka, Qareenka, Qareenka ama bixiyaha adeegga kale ee xirfadlaha ah.
Haddii aad qabto wax su'aalo gaar ah oo ku saabsan arrin kasta oo sharci ah waa inaad la tashataa Qareenkaaga, Udoodahaaga, Qareenka, Qareenka ama bixiyaha adeegga kale ee sharciga ah.
Waa inaadan waligaa daahin inaad raadsato talobixin sharciyeed, inaad diido talobixinta sharciga, ama bilawga ama joojiso talaabo sharci ah sababtoo ah macluumaadka boggan.
Wax kasta oo ka mid ah sharuudahaan sharci ayaa xadaynaya wixii ka mid ah masuuliyadayada si kasta oo aan loo oggolaanayn sharciga sharciga ah, ama ka saaran mid ka mid ah mas'uuliyadayada oo aan laga saari karin sharciga sharci ahaan.
Dhacdooyinka ka baxsan xakamayntayada.
Qodobkaan wuxuu sharxayaa inaanan masuul ka ahayn dhacdooyinka ka baxsan kontaroolkeena.
Hay'adda Reward Foundation mas'uul kama noqon doonto ama mas'uul kama aha wixii ku guuldareysta inay fuliso, ama dib u dhigto waxqabadka, mid ka mid ah waajibaadkayaga ku hoos jira Shuruudahaan iyo Shuruudaha ama qandaraas kasta oo la xiriira oo innaga dhexeeya oo ay keeneen dhacdooyin ka baxsan awooddeena macquul ah ("Force Majeure" ).
Dhacdooyinka Majeure Dhacdada waxaa ka mid ah ficil kasta, dhacdo kasta, wixii aan dhicin, ka-tagitaan ama shil ka baxsan kontoroolkayaga caqligal ah oo ay ka mid tahay gaar ahaan (xaddid la'aan) waxyaabaha soo socda:
Shaqo joojinta, qufulka iyo ficillada kale ee warshadaha.
Fowdo sokeeye, rabshado, duullaan, weerar argaggixiso ama hanjabaad weerar argagixiso, dagaal (ha dhawaaqo ama ha sheegin) ama hanjabaad ama u diyaar garow dagaal.
Dab, qarax, duufaan, daad, dhulgariir, hoos u dhac, cudur faafa ama masiibo kale oo dabiici ah.
Suurtagalnimada adeegsiga jidadka tareennada, maraakiibta, diyaaradaha, gawaarida ama qaabab kale oo dadweyne ama gaadiid gaar loo leeyahay.
Suurtagalnimada isticmaalka shabakadaha isgaarsiinta dadweynaha ama kuwa gaarka loo leeyahay.